» चितवनमा मोटरसाइकल चोरको बिगबिगी : आँखा झिमिक्क बाइक गायब
चितवनमा मोटरसाइकल चोरको बिगबिगी : आँखा झिमिक्क बाइक गायब
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार २०:०० प्रकाशित
चितवन – के तपाई आफ्नो मोटरसाइकल पार्किङमा छोड्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोस् तपाईको मोटरसाइकल चोरी हुन सक्छ । लाखौंमा किनेको मोटरसाइकल महिना दिन पनि चढ्न नपाउदै चोरी हुने क्रम पछील्लो समय बढ्दै गईरहेको छ ।
मोटरसाइकल अहिले अत्यावश्यक साधन बनिसकेको छ । यसले मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाउछ । तर जिल्लामा मोटरसाइकल चोरी हुने क्रम बढ्दै गएपछी यसले त्यती नै असहज पनि बनाईरहेको छ ।
चितवनमा बर्षेनी ठुलो संख्यामा मोटरसाइकल हराउने गरे पनि थोरै मात्र फेला पर्ने गरेको छ । यसले मोटरसाइकल चोरीको घटना नियन्त्रणमा चुनौतीको थपेको छ । चितवनका बिभिन्न स्थानबाट अहिले दैनिक जसो मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका छन् । आफ्नै घरदेखी कार्यालय, बजार, कार्यक्रम स्थल लगायतको ठाउँबाट मोटरसाइकल चोरी हुने क्रम बढ्दै गईरहेको छ । मोटरसाइकल पार्किङ गरेको केही मिनेटमा चोरी हुने गरेको गुनासो बढ्दो छ । पार्किङ गरी राखेको ५-१० मिनेटमै मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको समेत पीडितहरुको गुनासो छ ।
भरतपुर ३ निवासी सुनिल बोटेको प्र ३-०३-००१ प ४२३७ नं. को मोटरसाइकल पार्किङ गरी राखेको १० मिनेट पनि बित्न नपाउदै चोरी भयो । बोटेले गत असोज १८ गते फुलपातीको दिन नारायणी मोटर्स सहिदचोकबाट बजाज कम्पनीको पल्सर एन एस २०० खरिद गेरका थिए । सुनिलले दाई सुशील बोटेको नाममा निकालेको मोटरसाइकल किनेको १६ औँ दिनमा नै नारायणगढको बेलचोक स्थित हाट बजार अगाडिबाट साँझ ६:५० देखी ७ बजेको बीचमा चोरी भयो । भाईको डेरा अगाडि पार्किङ गरी पसल गएर फर्किदा मोटरसाइकल हराएको सुनिलले एटुजेड समाचारसँग भने । मोटरसाइकल हराएको भोली पल्टै उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा निवेदन दिए । मोटरसाइकल हराएको ४ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म भेटिएको छैन । सुनिलसँग अहिले मोटरसाइकल छैन तर उनी हरेक महिना मोटरसाइकलको किस्ता बुझाउदैछन् ।
भरतपुर ४ निवासी अजय लामिछानेको व्यथा पनि उस्तै छ । लामिछानेको पनि किनेको २२ दिनमै रातो कालो रङ्गको प्र ३-०३-००१ प ७९८० नं को बजाजको पल्सर एन एस २०० मोटरसाइकल चोरी भयो । उनले पनि नारायणी मोटर्सबाट नै कार्तिक १० गते उक्त मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए । मंसिर २ गते नारायणी नदी किनारबाट मोटरसाइकल चोरी भएको उनले बताए । साँझपख नारायणी किनार गएका उनको मोटरसाइकल ६ देखी ६:३० को बीचको हराएको उनले बताए ।
“साँझ ६ बजे बाइक पार्किङ गरेको थिए उनले भने, ‘साँढे ६ बजेतिर फर्किदा चोरी भईसकेछन ।” चोरी भए लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएको र भोली पल्टै नै गएर चोरी भएको उजुरी दिएको उनले बताए । करिब ४ महिना बितिसक्दा पनि हराएको मोटरसाइकलको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । उनले मोटरसाइकलको सिदार्थ इन्सुरेन्स नारायणगढबाट बिमा गराएका थिए । विमा कम्पनीले खोज्ने अवधी भनेर ४ महिनाको समय दिएको छ ।
पुर्वी चितवनको पर्सा घर भएका राजु न्यौपानेको पनि प्र ३-०३-००१ प ३९६८ नं. को पल्सर एन एस २०० किनेको एक महिना पनि नबित्दै चोरी भयो । असोजको अन्तिम तिर जलबिरेबाट मोटरसाइकल चोरी भएको उनले बताए । जलबिरेमा मोटरसाइकल पार्किङ गरी लामो झरना पुगेर फर्कदा हराएको उनले जानकारी दिए । मोटरसाइकल पार्किङ गरी राखेको एक घण्टामा नै चोरी भएको उनले बताए ।
उता लम्जुङ घर भएका सन्तोष भुजेलको प्र ३-०२-००८ प ३८ २३ नं. को पल्सर २०० यही फाल्गुन १८ गते आइतबार आफ्नै डेरा अगाडिबाट हरायो । डेरा अगाडि नै साँझ ५ बजे रोकिराखेको मोटरसाइकल राती ८:२० मा हेर्दा नभेटिएको भुजेलले जानकारी दिए । आफ्नै डेरा अगाडि नै रोकिराख्दा पनि हराउनुले चितवनमा मोटरसाइकल कती असुरक्षित छ भन्ने प्रष्ट हुने उनले बताए । भुजेलले गत दसैंमा मात्रै उक्त मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए । यि त केही प्रतिनिधि घटना हुन् । मोटरसाइकल चोरीको यस्तो घटना चितवनमा दिन प्रती दिन बढ्दै गईरहेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चितवनमा मोटरसाइकल हराएको ६५ वटा उजुरी दर्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी एक नारायण कोइरालाले जानकारी दिए ।प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने उजुरीका अनुसार धेरै जसो बजाज कम्पनीको पल्सर मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको डिएसपी कोइरालाले बताए । चालु आर्थिक बर्षमा अहिलेसम्म ६५ वटा मोटरसाइकल मध्य ५० वटा बजाजको पल्सर चोरी भएको उजुरी परेको उनले बताए । पल्सरमा पनि बिशेषगरी २०० सिसी र एन एस २०० बढी चोरी हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले बताउछ ।
प्रहरी कार्यालयमा चोरीको निवेदन परेका मध्य २२ वटा मोटरसाइकल भेटिएको कोइरालाले बताए । जसमा १५ वटा मोटरसाइकल स्वंय मोटरसाइकल धनीले र ७ वटा प्रहरीले फेला पारेको उनले बताए । मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा ४ जनाबिरुद्द मुद्दा नै चलाईएको उनले जानकारी दिए । ३ वटा मोटरसाइकल भने वेवारिसे अवस्थामा भेटिएको उनले बताए ।
मोटरसाइकल चोरीको उजुरी परे लगत्तै निवेदकले पठाएको फोटो र मोटरसाइकलको सम्पूर्ण विवरणसहित मातहतका सबै कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेर खोज तलास गरिने उनले बताए । खोज तलासको लागि छुट्टै चोरी शेल समेत रहेको छ । बढी भिडभाड हुने क्षेत्रबाट मोटरसाइकल चोरीको घटना हुने गरेको उनले बताए । तर पछील्लो समय आफ्नै घर अगाडि रोकिराखेको मोटरसाइकल समेत चोरी भएको उजुरी पर्ने गरेको उनले बताए ।
सिदार्थ इन्सुरेन्स नारायणगढका म्यानेजर माधव रेग्मी पछील्लो समय मोटरसाइकल हराएको भन्दै विमा दाबीको लागि धेरै निवेदन पर्ने गरेको बताउछन् । चालु आर्थिक बर्षमा सिदार्थ इन्सुरेन्समा मोटरसाइकल हराएको भन्दै विमा दाबीको लागि १३ वटा निवेदन परेको रेग्मीले एटुजेड समाचारलाई बताए । यो बाहेक अन्य विमा कम्पनीहरुमा पनि मोटरसाइकल हराएको भन्दै विमा दाबीको लागि दैनिक जसो निवेदन पर्ने गरेको छ ।
विमा दाबीका लागि मोटरसाइकल हराउने बित्तिकै सम्पूर्ण विवरणसहित जती सक्दो छिटो राष्ट्रिय दैनिक पत्रीकामा सुचना प्रकाशित गर्नु पर्ने उनले बताए । यस्तै मोटरसाइकल चोरी भएपछी विमा दाबीको लागि इन्सुरेन्समा निवेदन तथा ३ पटक प्रहरी रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने उनले बताए । “शुरुमा मोटरसाइकल हराएको भनी प्रमाणित हुने पुलिस रिपोर्ट दिनुपर्छ उनले भने, ‘ त्यसको एक महिनापछी खोजी कार्य जारी छ र ३ महिना पुगेपछी फेला नपरेको भनी प्रमाणित हुने व्यहोरा खुल्ने प्रहरी रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ ।”
तीन महिनापछी मोटरसाइकल धनीले सक्कली ब्लु बुक सम्बन्धित बिमा कम्पनीको नाममा रोक्का गरी चाबी र विमा लेख विमा कम्पनीलाई बुझाएपछी मात्र कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने उनले बताए । मोटरसाइकल हराएको ५ देखी ६ महिना भित्र मोटरसाइकल धनीले रकम फिर्ता पाउने उनले बताए । मोटरसाइकल खरिद गरेको दिन देखी हराएको अवधीलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित केही प्रतिशत काटेर अन्य रकम फिर्ता हुने उनले बताए ।